Global Voices teny Malagasy » Fijerin’i Karaiba : Ny Fahalalaham-Pitenin’i Charlie Hebdo Manoloana ny Tsy Fahazakana Adihevitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Febroary 2015 3:52 GMT 1	 · Mpanoratra Flora Thomas Nandika Miranah
Sokajy: Karaiba, Bermuda, Jamaika, Fahalalahàna miteny, Fifindràmonina, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Teny faneva “Je Suis Charlie”, nakarin'ilay mpisera Flickr Clément Belleudy; nampiasaina ao anatin'ny lisansa CC BY-SA 2.0.
Mbola miako manerana izao tontolo izao ilay famonoana olona 12, ka tao anatin'izany mpitandro filaminana sy mpanao gazety, tao amin'ny birao fanaovan-gazety iray tao Parisy Charlie Hebdo , tamin'ny fiandohan'ny volana janoary. 
Bilaogera Karaibiana roa, Jamaika ny iray ary ny iray hafa avy any Bermude, no nizara ny fomba fijeriny mikasika ny voina sy ny extremisma ara-pivavahana amin'ny ankapobeny.
Tao Paris i an'i Carolyn Joy Cooper, mpanoratra bilaogy ao amin'ny Jamaica Woman Tongue  tamin'ny fotoana nitrangan'ity fanafihana ity, mitsakotsako ao an-tsaina ny fihetsiky ny Eoropeana manoloana ny kolontsaina hafa — zavatra toa nandray dikany vaovao rehefa nandre momba ny famonoana tao amin'ny Charlie Hebdo tao amin'ny filazam-baovao ny alin'iny :
The peculiar phrase, ‘in some countries of Africa’, seems to imply that Egypt is not in Africa. If it were, ‘other’ would have been used instead of ‘some’
Mazàna aho manao tahaka ny mpizahatany ao amin'ny mozean'i Louvre, mitsidika ny rakitsarin'ny fahagolan-tany Ejiptiana. […]
Ao Louvre, miharihary fa Eoropa no ivon'izao tontolo izao. Azon'ny saina takarina izany. Ny sarotra ekena dia ny fomba nanehoana ny ambiny amin'ny tontolo izao. Ao anatin'ny raki-tahiry Ejiptiana, tohina tanteraka aho tamin'ny lahatsoratra izay nandikako manaraka etoana: “Matory amin'ny fandriana iva ny Ejiptiana, eny amin'ny tany aza, ny loha miondana amin'ny hazo, toy ny mbola fanaon'ny firenena sasany ao Afrika.”
Ilay fehezanteny miavaka kely, “firenena sasany ao Afrika”, dia toa te-hametraka fa tsy Afrika i Ejipta raha ‘hafa’ no teny tokony nampiasana fa tsy ‘sasany’
Nihamafy tao an-tsainy ilay mampiavaka ny fehezanteny tao aorian'ny tatitry ny BBC nampieritreritra nanondro ny “[teny] frantsay tonga lafatra” nataon'ireo nahavanon-doza, Cherif sy Kouachi, izay taranaka Alzeriana. Nanamarika i Cooper:
Amin'ny teny hafa, tsy heno tahaka ny olona vahiny izy ireo. Mbola jerena ho mari-panondroana ny fiteny. Saingy tsy azo inoana indraindray. Na dia eo aza ilay frantsay tonga lafatra teo amin'i Kouachi mirahalahy, dia nohosihosen'ny kolontsaina frantsay tsy misy fanontaniana ry zareo. Na dia teraka tao Frantsa aza, dia nanana fahadisoana mahafaty. Tsy frantsay ny kolontsainy ao an-trano. Tsy ny katolika no foto-pivavahany, fa Silamo. Ary tena silamo iringiriny izy ireo amin'izany.
Tamin'ny fampifandraisana ny fahasamihafan-dry zareo amin'ny kolontsain'ny frantsay be mpanaraka, dia nahita fomba fijery mahaliana tokoa izy amin'ny ““Je Suis Charlie” ” izay lasa sariohatra tamin'ity voina ity.
Ato anatin'ity fomba fanoratra ity, ny “izaho” iraisana dia ilay firenena frantsay mitambatra manohitra ny tsy voambara, saingy mametraka mazava, “ianao”. Ireo avy any ivelany izay tsy mifampizara ny soatoavina kolontsaina frantsay arahina.
Ankoatr'izay, ny filazana hoe “Charlie aho” dia entina hilazana ampahibemaso ny fahalalahana maneho hevitra, indrindra ilay hakanton'ny fanarabiana mandrantsana, vontoatim-panorenana ny fanondroana maha-firenena frantsay. Ny fahafahana mihomehy ny fahalemen'ny iray ka ny hafa no tena ivon'izany fanesoesoana izany. Tsy misy masia na olona na andriamanitra. Vokatr'izany, ny tsy fahafahana mitelina ny fitsapan'ny esoeso dia tsy fahafahana ho lasa Frantsay.
Ao Bermude, tsy ny momba ny Charlie Hebdo ihany no nanohina an'i Breezeblog, fa teo koa “ny vaovaon'ilay fandripahana nataon'ny Boko Haram tao Nigeria, ary ny fikapohana imasom-bahoaka nihatra tamin'ilay mpikatroka Raif Badawi tao Arabia Saodita, tamin'ny filazana hoe :
Nihazakazaka avy any amin'ny dona sy ny fahatezerana nankany amin'ny tahotra sy ny fihaikana ny fihetsem-poko. Nampanontany ahy ny tena dikan'izany fahafahana izany ho ahy ary inona ny soatoaviko sy ny finoako. Amin'ny maha-mpanao gazety tranainy ahy, dia efa niady tao anatiko tao ny fahalalahana maneho hevitra sy ny anjara toeran'ny fampitam-baovao. Mailaka toy ny rehetra aho nanova ny sarintavako Facebook ho ‘Je suis Charlie” ho endrika firaisankina. Na izany aza anefa, taorian'ny andro niadian-hevitra, namakiana sy nijerena ny tati-baovao, dia somary nirona kokoa ho amin'ny “Avec Charlie” aho.
Ilay mpanoratra ny “”Infidel ” [tsy mahatoky], Ayaan Hirsi Ali, izay notononin'i Breezeblog ao amin'ny lahatsorany , dia miray hevitra fa tsy tokony hisy fetrany ny fahalalahana maneho hevitra; nanamarika fa “any amin'ny gazety, oniversite, sekoly, dia tsy maintsy azontsika antoka fa mahatakatra fa miaro ny mpanesoeso amin'ny jihadista ny lalanantsika, fa tsy ny mifamadika amin'izay”. Namoaka ity teboka ity tao amin'ny lahatsorany i Carolyn Joy Cooper tamin'ny filazana fa: ,
Izay Silamo mikiry fa tsy azo vazivaziana i Allah dia manaisotra ny tenany hiala amin'ny firenena nandray azy. Miady ny andriamanitry ny adiny izy ireo ary tsy manao gadra. Avy amin'ny solontenan'ny vondrom-piaramonina Silamo tao London izay nanaovan'ny BBC antsafa ny iray amin'ny fanamelohana lalintsaina indrindra ny famonoan'olona. Tena miala tsiny aho tsy naharay ny anarany. Nilaza izy fa ny foto-pisainana efa tranainy be no tokony hovonoina fa tsy ny mpanao gazety.
Saingy mandrangaranga mizana tsindrian'ila i Breezeblog, amin'ny filazana fa :
Heverina ho fahalalahana maneho hevitra ny fanesoana ny Silamo. Fankahalana Semita ny mananihany an'i Isiraely.
Nanonona tarehimarika izy izay manolo-kevitra fa “ny 40 isanjaton'ny Silamo ao amin'ny firenena Eoropeana dia te hiaina eo ambanin'ny lalàn'i sharia […] Ambony kokoa ny taha eo amin'ireo 16-24 taona araka ny tatitra, maro amin'izy ireo no maniry ny firenena tandrefana ho lasa firenena Silamo. “Saingy, rehefa mijery ilay tsonga voatanisa hatrany ho fiarovana ny fahalalaham-pitenenana — “Izaho tsy manaiky izay lazainao, saingy harovako mandra-pahafaty ny zonao hilaza izany” — nanamarika izy fa “tsy azontsika atao intsony ny milefitra amin'ny tsy fandeferana”.
Nanaiky  i Cooper, nanolo-kevitra fa ny fitantarana Charlie Hebdo dia azo “jerena amin'ny lafiny tsara ho fanararaotra ieritreretana indray izay heverintsika ho voajanahary sy ara-pitsipika.
Afaka misaintsaina ny firenena ho toy ny maro kolontsaina ve i Frantsa, manome toerana ho an'ny vondrom-piarahamonina natao an-kilabao?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/12/67214/
 fiandohan'ny volana janoary.: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo#2015_attack
 fandripahana nataon'ny Boko Haram : http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/nigeria-massacre-possibly-deadliest-in-boko-haram-s-history
 fikapohana imasom-bahoaka nihatra tamin'ilay mpikatroka Raif Badawi tao Arabia Saodita, : http://edition.cnn.com/2015/01/12/middleeast/saudi-arabia-activist-flogging/
 miray hevitra : http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/08/ayaan-hirsi-ali-our-duty-is-to-keep-charlie-hebdo-alive.html
 amin'ny filazana fa: http://breezeblog.net/2015/01/13/je-suis/
 “Izaho tsy manaiky izay lazainao, saingy harovako mandra-pahafaty ny zonao hilaza izany” — : http://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Beatrice_Hall